Duufaannadii iyo duufaannadii ugu halaagga badnaa sanadihii ugu dambeeyay | Saadaasha Shabakadda
Hadda dhammaan aagga Baasifigga waxaa ku jira qulqulatooyinka duufaannada iyo duufaannada, waa wakhti ku habboon in la xusuusto dhacdooyinkii ugu xumaa ee dhacdooyinkan cimilada halaagga ee taariikhda dhow. Duufaannada waxay inta badan reebaan khasaaro dhaqaale oo aan tiro lahayn marka lagu daro dhaawacyo shaqsiyadeed oo badan.
Kadib waxaan kaaga sheegi doonaa duufaanadaas taas Waxay cinwaano ka qoreen sanadihii la soo dhaafay awoodooda burburka sare.
Sanadihii la soo dhaafay Duufaanta Bohla waxay ku dhamaatay inay burburiso magaalada Bangladesh iyo bariga Hindiya. Waxay dhacday 1970 waxayna dishay qiyaastii nus milyan qof. Sanadkii 10975 Duufaanta Nina waxay ku dhufatay inta badan Shiinaha, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 200.000 oo qof intii lagu guda jiray, iyo sidoo kale waxyeelo badan oo maadi ah.
Mid ka mid ah duufaannadii ugu dambeeyay ee khasaaraha ugu badan geystay waxay ahayd Mitch, tan iyo 1998 waxay ku sii wareegtay dhammaan aagga Bartamaha Ameerika, iyadoo laga tagay tiro 10.000 oo dhimasho ah iyo tiro badan oo la waayey. Sanadkii 2013 duufaantii Yolanda waxay xarun u ahayd wararka aduunka oo dhan tan iyo markii ay burburisay qayb ka mid ah Filibiin iyadoo laga tagay tirada ugu dambeysa ee 6500 dhimatay iyo malaayiin dad ah oo ay saameeyeen qaddarka weyn ee waxyeelada maadiga ah.
Duufaannadu waa duufaanno inta badan ku samaysma badweynta biyo diirran, oo sababa dabaylo xoog leh iyo roobab culus markay dhulka soo degaan. Aagga Atlantic waxaa lagu yaqaan magaca duufaannada halka guud ahaan aagga Baasifigga loogu yaqaanno duufaanno. Sidaad aragtay, kuwani waa ifafaaleyaal aad u burbursan oo burburiya wax kasta oo jidkooda ku jira. Waxaan rajeyneynaa inta ka hartay sanadka, xoogga dhacdooyinkaani ma sababi doonaan waxyaabo badan ama khasaaro shaqsiyeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaannadii iyo duufaannadii ugu waxyeellada badnaa sannadihii la soo dhaafay